Halkee bay marayaan dadaalada lagu xallinayo is mari waaga taagan doorashada? -
Home News Halkee bay marayaan dadaalada lagu xallinayo is mari waaga taagan doorashada?
Waxaa dhowaanahan socday waan waan iyo dadaalo la xiriira xal u helida is mari waaga ka taagan doorashada oo si toos iyo dadban isugu jiray, kuwaasoo ay ku lug lahaayeen Madaxda Soomaalida dhexdooda iyo wakiilada Beesha Caalamka.
Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Lafta Gareen oo doorka dadaaladan qaatay, kaddib kulankii uu la yeeshay qaar ka mid ah Midowga Musharaxiinta, ayuu bilaabay inuu dhinacyada isu soo dhoweeyo, isagoo xiriiro la sameeyay Madaxda Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo dhinac ah iyo Madaxda dowladda Federaalka sida Madaxweyne Farmaajo.
Inkastoo aan wax natiijo ah ka soo bixin dadaalada uu waday Lafta Gareen haddana waxaa uu abuuray jawi degenaan ah tan iyo markii uu qaatay doorkaas.
Waxay dadaaladaas bilow u noqdeen wada hadal khadka taleefanka oo labo jeer dhex maray Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe, labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrinta Gedo oo ah caqabada ugu weyn ee is mari waaga doorashada. Wada hadaladooda wax natiijo ah kama soo bixin oo aan ka aheyn inuu xaalada dejiyay, waxa hadda lagu kala joogo waa un wada hadaladaas khadka taleefanka.
Sidoo kale dhanka Beesha Caalamka waxaa socda dadaalo la isugu keenayo Madaxda Soomaalida in shir isugu yimaadaan, si tabashooyinka jira loo xalliyo, isla markaana dalka uga dhacdo doorasho isla oggol ah.
Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa bilaabay safaro uu ku tagayo xarumaha dowlad goboleedyada, waxaana safarkiisa ugu horreeyay uu ku tagay Baydhabo isbuucii hore, waxaa uu boggaadiyay Dadaalada uu waday Lafta Gareen ee doorashada in is afgarad iyo wada shaqeyn la gaaro ayuudhiirageliyay.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo warqadaha Aqoonsiga ka guddoomay danjirayaal cusub
Next articleFamilies in Bouar seek refuge in the church after rebel attacks